Qalabka Kala-gooynta Warshadaha - Kala-googa & Gogosha Jaranjarada Jaranjarada
Ellicott Dredges wuxuu sameeyay oo soosaaray qulqulatooyin iyo qalab qalalan si loogu isticmaalo adeegsiyo kala duwan iyo waaxyo suuq sida ciid iyo qulqulka jaranjarada, dib u soo celinta dhulka, iyo dekedaha iyo dekedaha. Xereynta dharka jaranjarada waxaa badanaa loo isticmaalaa dib u soo celinta, deegaanka, iyo mashaariicda la xiriira kanaalka. Ma ubaahan tahay wax caado ah? Mise u baahan tahay caawimaad go'aaminta saxda ah ee mashruucaaga? Wac +1 410-545-0232 ama dhammaystirkeena foomka macluumaadka mashruuca, iyo kooxda wax iibisa ayaa kula soo xiriiri doona si ay ugala hadlaan baahiyahaaga.
Ku sifeynta Macaamiisha
Bambooyin Kala Duwan